भारतको आन्ध्र प्रदेशमा रहेको एक पोलिमर उद्योगबाट ग्यास चुहिएपछि भयावह स्थिति
एजेन्सी । भारतको आन्ध्र प्रदेशको भिजागस्थित एक पोलिमर उद्योगबाट ग्यास चुहिएर भएको दुर्घटनामा सात जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त दुर्घटनामा अरु १२० जना घाइते भएका छन् ।
भारतमा तीब्र रुपमा फैलियो कोरोना भाइरस, कति पुग्यो संक्रमित र मृतकको संख्या ?
एजेन्सी । गएको २४ घन्टायता भारतमा एक हजार ४०९ कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका बिहीबार जनाइएको छ ।
भारतमा कोरोना भाइरस तीब्र रुपमा फैलिदै, कति पुग्यो संक्रमित र मृतकको संख्या ?
एजेन्सी । भारतमा कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म १६० जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै संक्रमितको संख्या ५ हजार ३५६ पुगेको छ । पछिल्लो समय भारतमा भाइरस तीब्र रुपमा फैलिएको छ ।
भारतबाट दैलेख आउनेको संख्या ९०४
काठमाडौँ । दैलेखमा भारतबाट दैलेख फर्कनेहरुको संख्या करीब हजार पुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जिल्लाभर भारतबाट आएका नागरिकको विवरण संकलनलाई तीव्र बनाएको छ । पछिल्लो प्राप्त जानकारीअनुसार संक्रमण बढेसँगै भारतबाट दैलेख आउनेको संख्या ९०४ पुगेको छ ।
२१ दिनका लागि भारत पुर्ण रुपमा लकडाउन भएको घोषणा
एजेन्सी । भारतमा कोरोना भाइरस तीब्र रुपमा फैलिन थालेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन हप्ताका लागि लकडाउन गरेको घोषणा गरेका छन् । उनले यो पुर्ण लकडाउन भएको बताएका छन् । अब भारतका १.३ बिलियन जनता पुर्ण लकडाउनमा रहनेछन् ।
कोरोना भाइरसः भारतले पनि उठायो ठुलो कदम
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भाइरस तीब्र रुपमा फैलिइरहेको अवस्थामा भारतले पनि उच्च सतर्कता अपनाएको छ ।
अनुसूचित जाति र जनजातिको व्याख्यालाई सर्वोच्चको दियो मान्यता
एजेन्सी । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सोमबार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारको रोकथाम) सम्बन्धी संशोधन कानुनको संवैधानिकतालाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलामा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विरुद्ध हुने अत्याचारका दोषी व्यक्तिलाई अग्रीम जमानत दिइनु हुन्न भन्ने कानुनी व्यवस्था सही रहेको उल्लेख छ ।
भारतमा सावित्राको उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन, हालसम्म चार खेलमा १२ गोल
काठमाडौँ । नेपाली महिला फुटबल टोलीकी सदस्य सावित्रा भण्डारीले भारतमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेकी छिन् ।